Posted by zizawa ⋅ 15/09/2011	⋅ 17 Comments
ဒီပေးစာကတော့ ဒီအချိန်မှာ အင်မတန်ရေးသင့်တဲ့ ပေးစာလို့ မြင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ပြီး မကြာခင်က ကိုဝတုတ်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ …. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက် လေလှိုင်းကြားမှာ ဖြေချင်ရာဖြေ ကြီးကြီးမေ လုပ်နေတယ်၊ သူ့ဘေးမှာ အကြံပေးထောက်ပြမယ့်လူ မရှိဘူးလား…. ဆိုတာကစလို့ ဒီကနေ့ သူနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်အပေါ် အမြင်သဘောထားမှာ ကျနော့်အမြင်နဲ့ တော်တော် တိုက်ဆိုင်ပါတယ်။ (စကားမစပ် ရှေ့က ပို့စ်နှစ်ပုဒ်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်မိပါတယ်။)
Posted by Ko Paw | 15/09/2011, 14:50 Reply to this comment	ko paw, you are seekingapartner in crime?🙂
Posted by zizawa | 15/09/2011, 15:07 Reply to this comment	I think you should eat shit of Daw Su before critisizing her.
Posted by Aung | 16/09/2011, 10:30 Reply to this comment	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ‘ သြဂုတ်၂၄ရက် သူ့အိမ်မှာ သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ ဆုံစဉ်က လာမည့် စက်တင်ဘာ တွင် အသက်(၁၉) နှစ်အောက် အာဆီယံလူငယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို မြန်မာ နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ လာ ရောက်အားပေးရန် ဖိတ်ကြားလာပါက သွားရောက် အားပေးကြည့်ရှုမည်ဟု ပြောကြားသည်’ ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်မိခဲ့ဘူးပါသည်။
Posted by Nan | 16/09/2011, 11:14 Reply to this comment	ဗမာလိုတော့ သေဖော်ညှိတာပေါ့ဗျာ။;-)
Posted by Ko Paw | 17/09/2011, 03:44 Reply to this comment	ကိုယ်မြင်တာကို မြင်သလို ထောက်ပြဝေဖန်ပေးနိုင်မယ့်သူတွေရှိတာ ဒေါ်စုအတွက် ကျေနပ်မိပါတယ်။ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး ဒေါ်စုလုပ်သမျှ ခေါင်းညိတ်ယုံတာထက်စာရင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတာကို အခုလို ထုတ်ရေးတာက ဒေါ်စုကို ကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပေါ်လွင်စေပါတယ်။
Posted by ကြာပီ | 17/09/2011, 05:44 Reply to this comment	ငါဘာကောင်လဲ ဘယ်လောက်အဖြစ်ရှိလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိဆုံးပါ။ လုပ်နိုင်ရင် သူများကိုဝေဖန်မနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ထလုပ်ကြည့်လုိုက်လေ။ ငါ့အကောင်ဝတုတ် ထိုင်နေတာ အကောင်းသား ထသွားမှခွေးမှန်းသိနေမယ်နော်။ ဟဲဟဲ.
Posted by Man of man | 19/09/2011, 13:50 Reply to this comment	အမေစု ဘောလုံးပွဲသွားကြည့်တာကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေ
Posted by nanshin81@gmail.com | 19/09/2011, 14:46 Reply to this comment	Don’t pretend to be wise by using words like ‘meta-physics’,’Machiavelli’ etc.
Posted by The offended one | 19/09/2011, 15:16 Reply to this comment	Don’t pretend to be wise by using words like ‘meta-physics’,’Machiavelli’ etc.
Posted by The offended one | 19/09/2011, 15:17 Reply to this comment	ကျွန်တော်သိသလောက်လေး ဝေဖန်ကြည့်မယ်။ ခင်ဗျာဟိုအော်ဒီအော် အော်နေမယ့်အစား ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ထလုပ်ကြည့်ပါလား။ ဟိုက ခင်ဗျားထက်တော်လို့ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်၊ သူအဓိကလုပ်ရမှာ ဘာလဲဆိုတာ သူသိတယ်၊ ခင်ဗျာအိမ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရန်ဖြစ်နေရင် ကောင်းလား။ ခင်ဗျားဘာလုပ်မလဲ။ စဉ်းစားပါ အထုံးလိုက်မစားပါနဲ့။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်အရင် သာအောင်လုပ်မလား နာအောင်လုပ်မလား။ ဒီအချိန်မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ။ ခင်ဗျာ ကိုမေးကြည့်မယ်ဗျာ။ reply လေးပြန်လိုက်စောင့်နေမယ်။
Posted by ပြည်သူတစ်ဦး | 19/09/2011, 16:29 Reply to this comment	ကိုဝတုတ်
Posted by dantaryee | 19/09/2011, 18:03 Reply to this comment	ကလေးဘဝက ဒိုးပစ်တမ်းကစားခဲ့ကြတော့။ ခေါင်ထိမှ အကုန်းလုံးစားရတယ် ( အကုန်ပိုင် တယ် )ထင်ကြတုန်းကိုး…..။ ကလေးအမြင် ကလေးတွေး နဲ့ခေါင်ကိုပဲ လှမ်းပြီး အပစ်မခိုင်းကြနဲ့ လေဗျာ. ။။
Posted by မောင်မိုး | 20/09/2011, 00:32 Reply to this comment	စာဖတ်သူတယောက်အနေနဲ့ ဒီစာကိုဖတ်ပြီး
Posted by ebawlaw | 20/09/2011, 02:10 Reply to this comment	ကိုဝတုတ်ဆိုသူရေ
Posted by မောင်ကောင်း | 20/09/2011, 06:03 Reply to this comment	I regret using what some consider offensive usages in my comment regarding Daw Suu’s appearance atasoccer match. Some readers made known to me their displeasure about these usages, and I accept some of these usages are indeed inappropriate in describing her recent public engagements. Apart from these usages, my opinion about her visit to the soccer match which I tried to express in the article remains unaltered. watote
Posted by Watote | 22/09/2011, 10:58 Reply to this comment	“ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ထောကျခံတယျ၊ တရုတျကို ဆဲတယျ၊ ခွလေေးခြောငျး ကောငျးတယျ ခွနှေဈခြောငျး မကောငျးဘူး၊ အမရေိကနျ ဘာလုပျလုပျ ကောငျးတယျ၊ တရုတျ ဘာလုပျလုပျ မကောငျးဘူးလို့ လှနေံဓားထဈ မှတျပွီး အမစေု၊ အမစေုနဲ့ အျောနရေရငျကို ကိုယျ့နိုငျငံရေး တာဝနျကပြွေီလို့ ခံယူထားသူတှေ အမြားကွီးပါ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ကိုယျတိုငျက ပွညျသူလူထုကို သူ ဘာလုပျလုပျ သူ့ကို ထောကျခံမယျ့ ပရိသတျ အဖွဈသာ အလိုရှိတယျ ဆိုရငျတော့ သူနဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ ပွညျသူလူထုကိုပဲ ရမှာဘဲ။ ”
Posted by BINO | 20/11/2011, 16:33 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...